नेपालमा लोकतन्त्र र सुशासनको प्रयोग – Sidha Patra
Sidha Patra सोमबार, बैशाख १५, २०७७
नेपालमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था ल्याउनका लागि थुप्रै संघर्षहरु भए। दशकौबाट कैयौँ आन्दोलनहरु हुँदै आए । नेपालको पहिलो दल प्रजा परिषदले सुरु गरेको प्रजातान्त्रीक संघर्ष देखि २००७ सालको नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्ती हुँदै पन्चायतको बर्बर दमन सहदै बहुदलको स्वतन्त्रता अभ्यास सम्म आइपुग्दा ति संघर्ष लोकतन्त्रकै खातिर गरिएका आन्दोलन थिए। त्यस्तै, दशक सशस्त्र द्वन्दको समाप्तीका लागि भएको २०६२/६३ को जन आन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको समुल अन्त्य सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको खाका कोरिएको छ। आजको बर्तमान अवस्थामा आउदा सम्म हामीले नेपाली राजनितीमा संघर्ष र आन्दोलनको मात्र अभ्यास देखेका छौ। यसर्थ हाम्रो अभ्यास र सिकाई संघर्षपुर्ण छ।
ईतिहासका बिभिन्न कालखण्डहरुमा हामीले लामो समय देखी लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु गुमिरहेको पाउछौ । देशका प्रमुख शक्ति राजनैतिक दल र राजा, कहिले पनि असल सम्बन्ध हुन सकेन । सायद नेतृत्वको स्कुलिङ्ग नै राजा र राजतन्त्र बिरोधी हुनु नै अबल जननेता हुने भन्ने भएर हो कि। नेतृत्वमा मात्र होइन, राजामा पनि राजनैतिक दलहरु प्रतीको अबिश्वास र त्रासले गर्दा सदैब मौका आउदा राजनैतिक दल प्रती आक्रामक प्रस्तुत हुने देखिन्छ। २००७ सालको क्रान्ती पछि, राजा महेन्द्र र जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपि कोइराला बिच तकराव पुर्ण स्थिति न रहेर, बिश्वासको बाताबरण बनेको भए, देश आज अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो कि ? राजा महेन्द्र र बिपि कोइराला मिलेर देशको नया लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा आधारित जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाई लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा सुशासनको सिद्धान्तको ब्यबहारिक प्रयोगमा जुटेको भए, आज देशको अवस्था र परिस्थिति फरक हुने थियो होला। तर त्यो हुन सकेन,त्यो हुन नसक्नुको कारण नेपालले लामो समय राजनैतिक द्वन्दको सामना गर्नु पर्यो, जस्ले गर्दा नेपालको बिकास, आर्थिक अवस्था र सामर्थमा रास आउन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, देशको सबै भन्दा महत्वपुर्ण भनेका जनता हुन, राजनैतिक द्वन्द र लडाईले नेपाली जनतामा पुराएको मानसिक क्षतीको त हिसाब नै छैन। भैतिक क्षतीको भरपाई हुन न सकिरहेको अवस्थामा मानसिक क्षति कसरी पुर्ती होस। जुन जनताको मानसिकतामा परिवर्तन द्वन्द र हिंसाले उत्पन्न गर्यो, मानिसहरु गुणि, सदाचारी, दयालु हुनुको साट्टो कठोर, निर्दयी अनि ब्यबिचारी हुनथाले। जसको फल स्वरुप समाजमा अबिश्वास, हिंसा, अपहरण, चोरि डकैती लगायतका अपराधहरु हुन थाले। हरेक १०-१५ बर्षमा भै रहने ब्यबस्था परिवर्तनले गर्दा उत्पन्न अस्थिरताका कारण कानुनिराज्यको सहि पालना हुन सकेन। कानुन तोड्ने नै सबैभन्दा महान क्रान्तीकारी हुन थालिसके पछि, ब्यक्तीवाद हाबी हुनु स्वभाबिक थियो। जब हरेक सम्यन्त्र असफल हुदै जान्छन तब केही प्रबुद्ध, सम्पन्न शक्तिशाली ब्यक्तीहरुको उदय हुन्छ । उनिहरुको चाकरी नै शासनको नया मोडालिटि बन्न पुग्छ । राज्यका हरेक निकायहरु उनिहरुका नियन्त्रणमा चल्छ । तब कानुनको प्रयोग ब्यक्ती अनुसार फरक हुँदै जान्छन । सैद्धान्तिक रुपमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था त भनिन्छ । तर ब्यबहारत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हरण भैसकेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक खोल भित्रको सिन्डिकेट रुल भन्न सकिन्छ । नाममा लोकतन्त्र त रहन्छ, तर जनताले जनताका लागि जनताद्वारा नै शासन गर्न बनाईएको अनेकै जनता आफ्नो खुन र पसिनाले सिन्चित गरेर आएको भनिएको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था जनताको पहुचबाट धेरै टाढा हुन पुग्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था कायम छ कि हुने खाने पुजिपती धनबादी सिन्डिकेट ब्यबस्था। जनताले सोच्ने बेला आएको छ। असल लोकतान्त्रिक सुशासनका सिद्धान्त केके हुन्छ्न? के तिनिहरु को ब्यबहारिक प्रयोग नेपालमा भएको छ त? असल लोकतान्त्रिक सुशासन ब्यबस्था अनुसार सहभागिता, प्रतिनिधित्व, चुनावको निष्पक्ष आचरण हुनु आवश्यक हुन्छ। के नेपालमा सहभागिता, प्रतिनिधित्व, चुनावको निष्पक्ष आचरण कायम हुन सकेको छ त? एकै छिन सोचौ त ! निर्वाचन प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचारको सामुल अन्त्य नहुदा सम्म असल लोकतान्त्रिक सुशासन कायम हुन सक्दैन। नेपालमा कति सान्सदहरु छन जस्ले करोडै खर्च नगरी सन्सद हुन सकेका छन। म नेपालभरीका सान्सदहरुलाई नै प्रश्न गर्न चहान्छु। जनताले चुनेको जन निर्वाचित प्रतिनिधि हुनका लागि करोडौ रकम लगानि गर्नु परेसी, सान्सद र ब्यपारीमा के फरक रहन्छ? जातीगत सहभागिता आवश्यक हो कि, बर्ग गत? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो। यो भन्दै गर्दा देशमा हजारौ बर्ष देखि जात जातीगत शोषण हुँदै आएकोले सबै जात जातीलाई लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको मुलधारमा लेराउनु आवस्यक हुन्छ भन्ने तर्क पनि गलत नहुन सक्छ। तर जातीगत भन्दा नि समाजले बर्ग र आर्थिक हैसियतका आधार मै भेदभाब गरिरहेको म बुझ्छु।